Mucaaradka Suuriya oo ka codsaday Moscow in ay cadaadis saarto maamulka madaxweyne Asad – SBC
Mucaaradka Suuriya oo ka codsaday Moscow in ay cadaadis saarto maamulka madaxweyne Asad
Moscow:- Mucaaradka Syria ayaa ka codsaday Russia in ay cadaadis saarto maamulka madaxweyne Bashaar Al-asad si uu u joojiyo caburinta kadhan ah shacabka ka soo horjeeda maaulka.
Aasaasaha xarunta Dimishiq ee daraasaatka iyo xuquuqda insaanka ninka lagu magcaabo Riyaadh Siyaad oo shir jaraa’id ku qabtay Moscow ayaa sheegay in ay suurtgal tahay in Russia ay cadaadis saarto maamulka Bashaar Al-asad si ay ugu noqoto fariin cad in caburinta shacabka ay tahay wax aan la aqbali Karin.
Mr Siyaad oo hogaaminayo wafdi mucaaradka Syria ayaa kulan kula yeeshay magaalada Moscow Mikhaa’iilMaargiloof oo ah egayga Russia ee qaaradda Africa ahna madaxa guddiga arrimaha dibadda golaha odayaasha Russia.
Mr Maarrgiloof ayaa caraaabay sida uu ugu faraxsan yahay natiijadii ka soo baxday wadahadaladii uu la yeeshay mucaaradka Syria ee booqashada ku maray Russia.
Dhanka kale wakaaladda maamulka xaaladda deg dega ee Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay hoos u dhacday tirada qaxootiga Siiriyiinta ka soo gudabaysa xadka labada dal 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo sidoo kalana ay jiraan tiro aan badnayn oo dalkooda dib ugu laabanaya.
Wakaaladda waxa ay sheegtay maalmihii la soo dhaafay 441 qof ay dib ugu laabteen Syria halka 76 qof ay soo gashay turkiga.
Sidoo kale ra’iisal wasaaraha ciraaq Nuur Al-maaliki oo kula kulmay baqdaad wafdi ganacsato suuriyiin ah ayaa sheegay in degnaanshaha gobolka uu ku xiran yahay Syria.